खुल्यो ‘मायाज बार’
काठमाडौं । सप्तान्ह मनाउनेहरुका लागि खुशीको खबर शुक्रबारदेखि ‘मायाज बार’ खुल्दैछ, जुन बारमा तपाइँ नायिकाहरुको कामुक नृत्य समेत हेर्न सक्नुहुने छ । नझुक्किनोस् यहाँ कुनै बार रेष्टुराँको कुरा गर्न लागेको होइन । बरु दिनेश डीसी निर्देशित चलचित्र ‘मायाज बार’ को कुरा खोतल्न लागिएको हो, जुन १२ साउनदेखि प्रदर्शनमा आउँदै छ ।
करिष्मा मानन्धर र निशा अधिकारी बार गर्लका रुपमा देखिने यो सिनेमामा राजेश हमाललाई पहिलोपटक भिलेनको भूमिकामा हेर्न सकिने छ । मसलेदार यो सिनेमामा लगानी समेत एक करोड भन्दा माथि रहेको बताइन्छ ।
गजित विष्ट यही सिनेमाबाट डेब्यु गर्दैछन् । महत्वकांक्षी मानिएको यो सिनमा एकल रिलिज हुने हुँदा बारलाई ‘ग्राहक’ बटुल्न केही सहज हुने देखिन्छ । तर सिनेमा प्रचार प्रसारले मात्रै नचल्ने यसअघिका थुप्रै घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले महंगोमा खुलेको डीसीको बारले नाफा नै कमाउला वा घाटामा जाला यसै भन्न सकिन्न ।
तेजेन्द्र बरुवाल भन्नुहुन्छ:
वकवास फिल्म, समय र पैसाको बर्बादी ! झिलमिल र तडक धेरै भएपनि निर्देशन नै सब भन्दा झुर ! जो पनि फिल्म बनाउन खोज्ने! अनि यत्रो हुन्छ गतिलो नेपाली फिल्म. मैले त पुरै फिल्म पनि हेरिन /हेर्न सकिन. कसरी हेर्ने ? केहि त हुनु पर्यो ! डिरेक्टर पासा ले दिमाग लगाएन, दिमाग पनि छैन होला !